ESI MEE KA NSETA IHUENYO VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esi mee ka nseta ihuenyo VKontakte
Ịtụgharị ihe oyiyi JPG gaa na PDF akwụkwọ bụ usoro dị mfe. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe niile ịchọrọ bụ iji bulite ihe oyiyi na ọrụ pụrụ iche.
E nwere ọtụtụ saịtị na-enye ọrụ a. Ọtụtụ mgbe ị na-agbanwe ịkwesighi ịtọ ntọala ọ bụla, ma ụfọdụ ọrụ na-enye ike ịmatakwu ederede, ma ọ bụrụ na otu dị na foto a. Ma ọ bụghị ya, usoro dum weere na-akpaghị aka. A ga-akọwa ndị na-esonụ ọrụ dị iche iche na-enweghị ike iji mepụta mgbanwe dị otú ahụ n'ịntanetị.
Usoro 1: ConvertOnlineFree
Ebe a nwere ike igbanwe ọtụtụ faịlụ, nke e nwere foto na usoro JPG. Iji tọghata ya, mee ihe ndị a:
Gaa na ọrụ ConvertOnlineFree
Bulite ihe oyiyi site na iji bọtịnụ "Họrọ faịlụ".
Pịa ọzọ "Tọghata".
Ebe ahụ ga-akwadebe PDF wee malite ibudata ya.
Usoro 2: DOC2PDF
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ akwụkwọ, dị ka aha ya pụtara, ma ọ nwekwara ike ịfefe ihe oyiyi na PDF. Na mgbakwunye na iji faịlụ site na PC, DOC2PDF nwere ike ibudata ya site na igwe ojii na-ewu ewu.
Gaa na DOC2PDF ọrụ
Usoro ntụgharị a dị nnọọ mfe: gaa na ibe ọrụ, ịkwesịrị ịpị "Nyocha ịmalite ibudata.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwa weebụ ahụ ga-eme ka onyinyo ahụ dị na PDF wee nye gị ịchekwa akwụkwọ ahụ na diski ma ọ bụ zipụ site na mail.
Usoro 3: PDF24
Ngwa weebụ a na-enye ka ibudata ihe oyiyi ahụ na ụzọ mbụ ma ọ bụ site na URL.
Gaa na ọrụ PDF24
Pịa "Họrọ faịlụ" ịhọrọ ihe oyiyi.
Pịa ọzọ "Gaa".
Mgbe nhazi faịlụ ahụ, ị ​​nwere ike iji bọtịnụ ahụ zọpụta ya "DOWNLOAD"ma ọ bụ zipụ site na ozi na faksị.
Nzọụkwụ 4: Ntanetị oge
Ebe a na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, nke gụnyere JPG. Enwere ike ibudata faịlụ site na nchekwa nchekwa igwe. Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ ahụ nwere njirimara nkwado: mgbe ejiri ya mee ihe, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ma detuo ederede.
Gaa na ọrụ ntanetị nke Ịntanetị
Iji malite usoro ntughari, mee ihe ndị a:
Pịa "Họrọ faịlụ", mee ka ụzọ ahụ gaa na onyinyo ahụ ma debe ntọala ahụ.
Pịa ọzọ"Agbanwe faịlụ".
Mgbe nhazi ihe oyiyi ahụ ga-ebudata ihe ederede PDF. Ọ bụrụ na nbudata ahụ amaliteghị, ịnwere ike ịmalite ya ọzọ site na ịpị ederede "Ntuziaka njikọ".
Usoro 5: PDF2Go
Ihe omuma weebụ a nwere mmuta ederede ma nwee ike ibudata ihe oyiyi si na igwe ojii.
Gaa na PDF2Go ọrụ
Na ibe weebụ, pịa "DOWNLOAD LOCAL FILES".
Mgbe nke ahụ gasịrị, jiri ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na enwere mkpa dị otú a, wee pịa "Zọpụta mgbanwe" ịmalite ịtụgharị.
Mgbe ịmegharịrị, ntinye weebụ ga-eme ka ị zọpụta PDF site na iji bọtịnụ ahụ "Download".
Mgbe ị na-eji ọrụ dị iche iche, ị nwere ike ịhụ otu atụmatụ. Onye ọ bụla n'ime ha, site na ya, na-esi na nsọtụ nke mpempe akwụkwọ ahụ, ebe a naghị atụgharị anya nke a ka a gbanwee n'ọnọdụ ntọghata, ọrụ dị otú ahụ bụ naanị enweghị. Ị nwere ike ịnwale ụdị ọrụ dị iche iche ma họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụghị ya, ihe niile weebụ a kpọtụrụ aha n'elu na-arụ ọrụ nke ịgbanarị JPG na PDF dịka nke ọma.
Free MP3 Nyocha ụda 1.9
Otu esi achọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ dị na Instagram
Esi gbanwee akaụntụ email nke Microsoft
Na saịtị a, e nwere atọ, n'ozuzu, isiokwu otu ụdị ahụ, nke isiokwu ndị a na-egosi na isiokwu ahụ n'elu. Enweghi ike imeghe akwukwo na ihe omuma I nweghi ike ibanye na umu klas gi .. N'onu otutu ihe, ihe mere na ebe ufodu (ma obu ihe niile n'otu ugbua) abughi njehie na faịlụ ndi ozo ma obu ihe ndi ozo di n'ime ya ma o bughi ya. GụKwuo
Otu esi tinye ederede na AutoCAD
Ịmepụta ihe ndabere nchịkwa zuru ezu na Windows 8 na Windows 8.1 site na iji PowerShell